दाम्पत्य जीवनका भ्रम - Yohosamachar
दम्पतीबीच किन ठाकठुक पर्छ ? के निहुँमा उनीहरुबीच मनमुटाव हुन्छ ? कुन कारणले दाम्पत्य सम्बन्धलाई धरापमा पार्छ ?
खासमा यसका लागि श्रीमान–श्रीमतीले गर्ने एकअर्काप्रतिको अपेक्षा वा बुझाई जिम्मेवार छ । भनिन्छ नि, विवाह भनेको सम्झौता हो । दाम्पत्य जीवनमा आपसमा धेरै कुरा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबै कुरा आफुले भनेजस्तै, सोचेजस्तै ठीकठाक नहुन सक्छ । आफुले अपेक्षा गरे अनुरुपका कुराहरु प्राप्त नहुन सक्छ । जब हामी यी सामान्य कुराहरुलाई बेवास्ता गर्छौं, तब दाम्पत्य सम्बन्धमा फाटो आउँछ । अतः दम्पतीबीच एकअर्कामा कस्तो धारणा र अपेक्षा हुन्छ, जसले उनीहरुको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउँछ ?
व्यक्त नगरे पनि आफ्ना कुरा पार्टनरले बुझ्नेछन्
त्यस्तै बुझेपछि पनि त्यसलाई पुरा गर्नै पर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले जीवनसाथीलाई आफ्नो भावना, इच्छाहरुको बारेमा बताउनुपर्छ । सम्बन्धमा तनावमुक्त रहने एकमात्र माध्यम संवाद हो र कुरा नगरि एकअर्काको मनको कुरा केही पनि थाहा हुँदैन भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गरौं ।
दुवैले बराबर काम गर्नुपर्छ
वास्तविकताः सबैको क्षमता, खुबी एकनास हुँदैन । सबैले समान ढंगले काम गर्न सक्दैन । तर, कतिपय श्रीमान वा श्रीमती सोच्छन् कि आफुले जस्तै पार्टनरले पनि काम गर्नुपर्छ । पार्टनरको काम गर्ने ढंग, सीप आफ्नो जस्तै पूर्ण हुनुपर्छ । यस किसिमको धारणा आफैमा गलत हो ।
व्यवहारिक एवं घरेलु कामहरुलाई बराबर बाँड्नु कहिलेकाँही व्यवहारिक हुुँदैन ।
पार्टनरलाई हरेक दुःख बताउनु हुँदैन
विवाहले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ
पार्टनरलाई उसको गल्ती बताएर त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ
भावना नभई पार्टनर प्रति प्रेम पनि दर्शाउन सकिँदैन
वास्तविकताः विवाहले सिकाउने एक पाठ यो पनि हो कि कहिले काहीँ पार्टनरको लागि आफूलाई मन नलागेको कुरा पनि गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही फिलिंग्स आँउदैन तर सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि तपाईंले आफ्नो रुची नभए पनि उनीहरुले भनेको मान्नुपर्छ ।
पार्टनरको व्यवहार, बानी वा कुनै कुराले चित्त दुखाएको छ भने पनि कहिले काहीँ आफूले त्याग गर्नुपर्छ । प्रेम पाउनको लागि पहिले प्रेम दिनुपर्छ । सकरात्मक व्यवहार गरेमा मात्रै पार्टनरको मनमा पनि स्नेह जाग्छ । र, परिणामस्वरुप तपाईंको मनमा पनि उनीप्रति फिलिंग्स पैदा हुन्छ ।
श्रीमान श्रीमती एकअर्काको मिल्ने साथी हुन्
मित्रतामा कहिले काहीँ मानिसहरु एकअर्कालाई आफूले जे गरेपनि हुन्छ जस्तो गर्छन् तर, विवाहमा यसले समस्या हुन सक्छ । विवाहमा एक अर्काको विचारको सम्मान गर्नु धेरै आवश्यक हुन्छ ।
← स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने तरीका
चौरजहारी घटनाको पुर्वमन्त्रि शाहवाट दुःख ब्यक्त →